Slovakia: Hampandoa vola ny vaovao an-tserasera tahaka ny TV Cablée ve? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Aogositra 2010 14:21 GMT
Miova tokoa ny andro. Eny fa na any Shina aza ankehitriny nisy ny olona, taona vitsivitsy lasa izay, no nihomehy raha nilazana fa handoavam-bola ny mankany an-trano fidiovana, ary, iza no mahalala, fa angamba heverin'ny taranaka manaraka fa tsy iadian-kevitra izany mandoa vola ijerem-baovao amin'ny aterineto izany.
Mety ho efa henonao angamba ny nampidiran'i Rupert Murdoch fandoavam-bola ho an'izay te-hamaky izay voalazan'ny gazetiny an-tserasera. Vantany vao voalaza izany, dia nisy ny tatitra, fa ny The Times, ohatra, dia nanary ny 90%n'ny mpamaky azy an-tserasera, saingy ny mahaliana ny tompony moa dia ny fijerena na nahazo tombony izy na tsia tamin'ny fanovana nataony.
Any amin'ny vaovao [gazety] Slovaky kosa dia tarafina amin'ny sehatra maivamaivana [light version] ho “taorian'ny fampandoavan'ny The Times vola ny mpamaky azy an-tserasera no nahaverezany ny roa ampahatelon'izy ireo,” nefa tsy nahalala akory fa eefa nanary ny roa ampahatelony voalohany izy tamin'ny tsy maintsy nisoratana anarana maimai-poana ho an'izay te-hamaky vaovao. Lahatsoratra hafa indray no mampandre fa “tsy maintsy mandoa vola ny mpamaky amin'ny gazety Amerikana iray raha hilaza ny heviny ao anaty adihevitra iray,” nefa ny tena marina tsy maintsy nandoa vola kely indray mandeha izy ireo, mba hahalalan'ny gazety ny anarany amin'ny alalan'ny karatra fahany.
Araka ny fitsapan-kevitra faramparany teo dia “tsy handoa vola hijerena vaovao amin'ny aterineto izany ny ankamaroan'ny Slovaky.” Tsy mahagaga izany. Efa nampandoa vola raha hamoaka hevitra politika koa indray maka ny SME newspaper (efa teto an-tserasera hatramin'ny 1993 aloha), fa nony afaka kelikely , noho ny tsy fahalalàn'ny mpamaky, nalalaka indray ny fanehoan-kevitra ka natao “fanomezana ho an'ny mpamaky.”
Mety hanontany angamba ny tsirairay hoe nahoana ny gazety Slovaky no liana fatratra amin'ny resaka vaovao an-tserasera andoavam-bola izay ampiaharina any an-toeran-kafa manerana izao tontolo izao. Tsy mahavariana intsony izany ho an'ny mpanara-baovao: nisy zava-nitranga manko.
Niala tamin'ny asany ka nanangana orinasa ho azy manokana ny talen'ny famoahana tao amin'ny SME teo aloha, Tomáš Bella, ka ny kandrany ao dia ny fampidirana fomba fandoavambola iraisana an-tserasera ho an'ny vohikala Slovaky (ary amin'ny manaraka ihany koa dia ho an'ireo firenena Eoropeana afovoany hafa). Ny antenainy moa dia ny handoavan'ny mpamaky vola 2.9 euros isam-bolana hahafahan'izy ireny mijery ny sokajy premium amin'io fiaraha-miasa io.
“Tsara dia tsara ny mason-tsivana eto” hoy ny nambarany. “Amina tsenam-barotra kely tahaka ny an'i Slovakia sy ny Repoblika Czech, dia ampy ny miasa miaraka amina famoahana lehibe vitsy dia vitsy. Tsy mahita toeran-kaleha ny mpamaky tsy mandoa vola avy eo. … tahaka ny TV cablée. Raha tsy maintsy eritreretina avokoa ny fantsona tsirairay, dia ho kelikely ihany no ho tratrako… Saingy raha hoe vola kelikely ihany no aloako dia azoko jerena avokoa izy rehetra dia tsy horaharahiako |tsy mampaninona izany?|. … Efa an-taonany no nokarohina ny fametrahana fitaovam-pandoavam-bola mety ampiasaina eto, satria tsy betsaka loatra manko ny votoaty ananana manokana tahaka ny an'ny Wall Street Journal. Izany no antony nampandamoka ny fikasana rehetra an'ny tsirairay tahaka izao taloha.”
“Hisian'ny fahombiazana ara-psikolojika,” hoy i Bella nanohy, “dia tsy maintsy miainga amin'ny vidiny kely, toy ny marika fandraisana anjara ho ana amboaran-tolotra izahay.”
[Marihina fa manana famoahan-gazety an-tserasera andoavam-bola i Slovakia amin'izao fotoana izao -ny gazety mivoaka isan-kerinandro “.tyzden” – izay tsy maintsy handoavan'ny mpamaky vola raha te-hahita izay voasoratra amin'ny gazety an-taratasy. Mba hahazoana ny vaovao an-tserasera, dia azon'izy ireo ampiasaina ny karatry ny banky na aloa amin'ny alalan'ny SMS.]
Ahoana ny hevitry ny mpiserasera Slovaky momba an'io?
Sahiko ny mandoa vola ahafahako mamaky lahatsoratra tsara sy manandanja ho ahy fa tsy feno dokambarotra mipendrapendrana na lahatsoratra nosoratana handokafana varotra XY. Ny mety ho banga na tsia ao amina lahatsoratra anatin'ny sokajy premium dia ny sarin-dokambarotra mipendrapendrana.
Orinasa iray ihany no hanana ampihimamban'ny fahalalana izay tian'ny mpamaky gazety an-tapitrisany sy mahalala hoe iza no mamaky vaovao sy izay vaovao vakiany amin'ny fotoana iray, sy ny hoe naharitra hafiriana, mbamin'ny hevitra navoakany … Misy dingana tsy dia mendrika amin'ny fampiasana vaovao ho amina fikendrena ara-dokambarotra ho an'ny tsirairay ao.
Mino tanteraka aho fa tsy hahomby io ary ho very karataka [haingana dia haingana] i Bella!
[Ny] zavamisy mampalahelo dia ny votoaty hany tiako andoavam-bola amin'ny an'ny SME dia ny adihevitra, satria raha ny hatsaran'ny lahatsoratra ao aloha, ny adihevitra ao no misy raisina kokoa noho ny lahatsoratra niandohany.
Araka ny lazain'ny nextbig [Orinasan'i Bella], mety hisy ny [fandoavam-bola] “fampakaran-tsanda” raha haneho hevitra amina lohahevitra sy amina fifidianana amina fitsapan-kevitra [an-tserasera]. Mino avy hatrany aho fa hipoitra ny forum www.forum.sk/sme.html tsy handoavam-bola, miaiinga avy amin'ny lahatsoratry ny SME
Nahoana moa fa tsy olana raha handoa vola amina vaovao manandanja sy tsara izay tsy hitako any amin'ny toeran-kafa? Efa mandoa vola aho izao hidirana amin'ny tyzden.sk. Saingy mandritra izany fotoana izany kosa tsy handoa vola ho an'ny SME aho. Vaovaon'ny masoivohom-baovao manko ny ankamaroan'ny avoakany.
Tokony ho efa hatry ny ela [no nampidirina ireny fiovana ireny] – farahafaharatsiny, tsy ho nandany ny androny tamina fahadalana ny olona.
democracynow.org sa therealnews.com, na mcclatchydc.com, salon.com, huffingtonpost.com – ireo no loharanom-baovao sahiko andoavam-bola… Saingy indrisy tsy misy ny vohikala tahaka ireny eto Slovakia…
Tantaran'ny Slovakia farany
16 Desambra 2019Eoropa Afovoany & Atsinanana
14 Septambra 2019Repoblika Tseky
Soratra miverina: Global Voices teny Malagasy » Slovakia: Hampandoa vola ny vaovao … | World Cup
[…] Global Voices teny Malagasy » Slovakia: Hampandoa vola ny vaovao … Submitted by admin on Friday, 6 August 2010No Comment “Amina tsenam-barotra kely tahaka ny an’i Slovakia sy ny Repoblika Czech, dia ampy ny miasa miaraka amina famoahana lehibe vitsy dia vitsy. Original post: Global Voices teny Malagasy » Slovakia: Hampandoa vola ny vaovao … […]
06 Aogositra 2010, 21:25